ကျွန်တော်တို့…ရွာ…။ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကျွန်တော်တို့…ရွာ…။ (၁)	38
Posted by black chaw on Jul 14, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 38 comments
အခု တလော ရွာထဲ လူအ၀င်နည်းပါတယ်…။
မင်းကရော ရွာထဲရောက်လို့လားလို့ မေးရင်တော့
မန်းဂဇက် ဆိုတာ ငယ်ချစ်ဦး ရည်းဇားဦးကြီးဆိုတော့
ခိုးကြည့်ရင်ခုန် ရတာနဲ့တင် ကျေနပ်နေတဲ့ သဘောပါ…။
ရွာထဲလူအ၀င် နည်းတာ အခုမှ မဟုတ်ပါ…။
ကျွန်တော်တို့ မောင်ဂီတို့ ဖလန်းဖလန်း ဖြစ်တဲ့
ရွာကို ပြန်လာကြပါဗျို့ လို့
ကိုမိုက် လူခေါ်တဲ့ ကဗျာ ထွက်လာခဲ့တာပါပဲ…။
အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ကိုမိုက်ရဲ့ အဲဒီကဗျာကို သူကြီးက
ရွာထိပ်မှာ တစ်ပတ်လောက် ကြာအောင်
နောက် မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတာက
ကိုဆာမိ နဲ့ ခင်ဇော်ကြီးတို့ ၂ ယောက်ပေါင်း တင်ခဲ့တဲ့
ဇီဇီဆာဆာ ပို့စ်လေးတွေဟာလည်း လူခေါ်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေပါပဲ…။
ကျွန်တော် ကလည်း ကျွန်တော့်နည်း ကျွန်တော့် ဟန် နဲ့
လဖက်ရည်ဆိုင် စကားဝိုင်း လို ပို့စ်မျိုးဟာ လည်း
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နောင်တော်ကြီး
ကိုသစ်မင်း ကို ရွာထဲ ရောက်အောင် စွဲဆောင် ခဲ့တဲ့ ပို့စ်ပေါ့…။
လဖက်ရည်ဆိုင် စကားဝိုင်း ပို့စ် ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ…။
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ကိုသစ်မင်း အနေနဲ့ တာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်…။
တစ်ယောက်ချင်းစီကို လေးလေးစားစား ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ…။
ကျွန်တော့် ရည်ရွယ်ချက် က ဒီလိုပါဗျ…။
ရွာထဲ မရောက်ဖြစ်ကြသူတွေကို စုစည်းပြီး
ဒါပေမယ့်…ရွာထဲ လူစည်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ရွာပြင် ရောက်သွားတာပါပဲဗျာ…။
မစ်ရှင် က အောင်မြင်သွားတဲ့ သဘောပေါ့…။
နောက် အော်ပရေတာဘလက် လို ပို့စ်မျိုးတွေ…။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဝေဖန်ချက်လို (ခိုးခိုးခစ်ခစ် ဇာတ်ကား) ဟာမျိုးတွေ…။
အခါတော်ပေး ကိုရွှေဘလက် လို ပို့စ်မျိုးတွေ…၊
ယောက်ျားမာယာ…၊ ဇွန်သဉ္ဇာဂိတ် လို ပို့စ်မျိုးတွေဟာ
ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ လူခေါ်ပို့စ်တွေပါပဲ…။
FB မှာလည်း ရွာသူရွာသား တစ်ယောက်ခြင်းစီကို
ရွာက လွမ်းနေတဲ့ အကြောင်း စတေးတပ်စ် လေးတွေတင်ပြီး
အခု လောလော ဆယ်တော့ ရွာထဲမှာ အရီးလတ်က
ခြေလှမ်းဦးများ နဲ့ ကခုန်ခြင်း ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတွေနဲ့ လူခေါ်နေတာကို
ကို Nature ကြီးရဲ့ ပို့စ်တောင် တက်လာတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်…။
ကဲ…ဘလက်ချော ဘာ သောက်တလွဲတွေ ရေးမလဲဆိုပြီး
ဒီနေရာအထိ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်လာပေးတဲ့
ရွာဘက် ခဏတဖြုတ်ဖြစ်ဖြစ် ကြွလှမ်းခဲ့ကြပါဦးလို့
မေတ္တာရှေ့ထားလို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် တမုံ့တကားတည်း။
Kaung Kin Pyar says: ရွာထဲက အမြဲရောက်ဖြစ်ပါတယ် လေးဘလက်ရေ…
နေ့တိုင်းတော့ ရွာပိုစ့်ကို ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်…
အလုပ်လေး နည်းနည်းများနေလို့ သိပ်မဖတ်ဖြစ်..၀င်မရေးဖြစ် မပြောဖြစ်နေတာပါ..
နောက်ပိုင်း ရွာဘက်ပြန်လှည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါဦးမယ်
black chaw says: ကျေးဇူးပါ ကောင်းကင်ပြာ ရေ။
လည်း မ ရောက်ဖြစ် ပါဘူးဗျာ။
Mike says: .အူလေးခေါ်တော့လည်း လာကြပါလိမ့်မယ်လေ
black chaw says: အဲ့လိုတော့လည်း ဟုတ်သေးဘူးဗျ ကိုမိုက်။
ရွာထဲလူအဝင် နည်းနေတာ သူတို့အလုပ်တွေနဲ့ သူတို့ 
မအားလပ် ကြလို့ ရယ်
FB မှာ ပျော် နေကြတာ ကြောင့်
ကျွန်တော့်မှာ အုပ်စု မရှိပါဘူး ဗျာ။
တောင်ပေါ်သား says: ရွာထဲ အမြဲရောက်ပေမယ့် ပို့စ်တိုင်းမှာတော့ ကောမန့် မပေးဖြစ်သလို
လောလောဆယ် ရုံးကိစ္စ အိမ်ကိစ္စတွေ ပိလှသမို့ ဘာပို့စ်မှတောင် ဖြစ်မြောက်အောင် မတင်နိူင်ဘူးဗျာ ၊
black chaw says: မ ရောက် ဖြစ် သူ ခြင်း
ဖြေ ရှင်း ချက် တွေ ပေး စ ရာ
မ လိုပါ ဘူး ကိုမျိုး ရယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ရွာပြင်က ပတ်ချောင်းတယ်ဆို…
ပြဿနာက ရုံးက သူဌေးက ကွန်ပျူတာက အင်တာနက်ကို ပိတ်တယ်…
(၁) အချက်က ဆာဗာထဲက ဒေတာတွေကို ပါစင်နယ်မေးလ်က တစ်ဆင့် ကူးယူတာကို ကြုံခဲ့လို့တဲ့
(၂) အချက်က အင်တာနက်သုံးပြီး အာရုံများ အလုပ်တွေ မှားလို့တဲ့ (တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စပေါ့လေ)..
ဆိုတော့ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ရင် ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်ပြီး အင်တာနက် မသုံးရတော့ဘူးပေါ့..
သိတဲ့အတိုင်း ရွာဝင်တယ်.. ကွန်မန့်ပေးတယ်ဆိုတာ ဖဘ လို like လေး တစ်ချက်နှိပ်ရုံ.. စာလေး တစ်ကြောင်းလောက်ရေးရုံ.. စတေးတပ်စ်လေး သုံးကြောင်းလောက် တင်ရုံ.. ပုံလေး တစ်ချက်လောက် ကလစ်ရုံနဲ့ ရတာမဟုတ်တော့ကာ… ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာအရ ရွာအဝင်ကျဲသွားတာ ဖြစ်ပါကြောင်း… ခု ဖုန်းအသစ်လေး ဝယ်ထားတော့.. အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားလေးက သိပ်မဆိုးဘူး.. ညဘက် လက်ပကျွတ်နဲ့ သုံးဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ကွန်းမန့်ဝင် ရေးတာ အတွက်
မြစပဲရိုး says: ကဘချော ရဲ့
. ရွှေပြည်ထဲ ရောက်တုန်း က နေ့လည်ချိန် တစ်ချို့ မှာ ကွန်ပျူတာ သုံးပြီး ရွာထဲ ဝင်ကြည့် သေးတယ်။
တဝဲလည်လည် နဲ့ အတော်စောင့်ရတာ မို့ အဲဒီကထဲ က လူတွေ ဘာကြောင့် ပို့စ်တင် နဲ တယ် ဆိုတဲ့ အချက် တစ်ချတ် တွေ့လိုက်တယ်။
အိမ်တွေ မှာ အင်တာနက်လိုင်း တွေ မြန်မြန် နဲ့ ရလာတဲ့ နေ့ တွေ တစ်နေ့နေ့ တော့ ရလာကောင်းပါရဲ့။
အခု မြန်မာပြည်ထဲ မိုဘိုင်း သုံးစွဲမှု တိုးတက် နေမှု တွေ က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ဆယ်စု လောက်ကထဲ က အီသီယိုးပီးယား မှာ တော်ရောမြို့ပါ ရနေခဲ့ပြီးပြီ။
အဲဒီမှာထက် တောင် ဈေးသက်သာသေး။
အခုထိလဲ အဲဒီလို ဘဲ ပျော်ပျော်ကြီး သုံးနေဆဲ။
တကယ်တော့ ဒါဟာ နည်းပညာ တိုးတက်မှု မဟုတ်ဘူး။
ဒါကို တိုးတက်မှု ဆိုပြီး ရှာကြံ ကျေးဇူးတင်နေကြရင် မိုဘိုင်း ဖုန်း နဲ့ စာရိုက်တင်ရတဲ့ ဒုက္ခ က တစ်သက် ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ရှင့် အစ်မ လူ ခေါ် သာနေတာပါ။ တကယ်တော့ လဲ အတင်း မဆွဲ ရက်ပါဘူး။
ကိုယ်သာဆို ဝင်ဖတ်ဖို့တောင် လွယ်မယ် မထင်။
ကိုချော က ရွာ ကို ရီးစားဦး လို သဘောထားသလို တင်စားတော့ ပြုံးမိသေး။
ကိုယ်က ရွာ ကို …….
ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ။ ကိုယ်လိုချင်တာ ရှိလို့ အပျော်တွဲတာကိုလေ။
. နောက် တော့ ထားခဲ့ မှာ။ စိတ်ချ။
joke (or) lie
black chaw says: ထားခဲ့မယ် ဆိုတာ ယုံပါတယ် အစ်မ ရယ်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လည်း ထားခဲ့ပြီးပြီကိုး။
ရည်းစားဦး လို့တင် စားတာက တော့
စာရေးခြင်းကိစ္စ မှာ မန်းဂဇက် က
ရည်းစားဦး နဲ့ညားသူ ရှားပါတယ်ဗျာ။
ညည်းမိတဲ့ သ ဘောပါ။
ကျွန်တော်တို့ လည်း ထားခဲ့ရတာပါပဲ
မောင် ဘ ချော။
မြစပဲရိုး says: အာ့ ဆိုရင်တော့ ဒွတ်ခ ကိုချော ရဲ့။
သများ ရဲ့ အင်တာနက် ထဲ ဝင်ဝင်ပြီး မှတ်ချက် ပေးနေ တာ ဂဇက် က အရင်မဟုတ်။
တစ်ခြား ဆိုက် က မို့ အဲဒီ ရီးဇားအူး တော့ ကျန်ခဲ့ပြီ။
ဒီတော့ ဒီ ရီးဇားမအူး တာကြီး နဲ့ တစ်သက်လုံး ဇာတ်ပေါင်း ရတော့မှာလား။ lol:-)))
black chaw says: တကယ်တော့
ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ 
ခွဲကြရ မှာပါပဲ အစ်မ ရယ်။
အ ရေးကြီးတယ်လို့ ထင် ပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: . ကြည့် ဟေ့။
ဒီလို စကားလုံး လေး တွေ နဲ့ လူ တွေ ကို ကြွေစေ တဲ့ တံခါးမှူးကြီး :-)))
ကိုယ်တော် … အခုတော့ စက်တော်ခေါ်ဦးတော့။ အတော် ညဉ့်နက်ပြီ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: (ကျွန်တော်တို့ မောင်ဂီတို့ ဖလန်းဖလန်း ဖြစ်တဲ့
ကိုချော တူးခဲ့ဘူးတာလေး ပါ
မြစပဲရိုး says: လွမ်း နေကြတယ် ဆို ပြန်လာကြ ပါ။
တစ်ပါတ် ကို တစ်ပုဒ် ဘဲ တင်။ :-))
black chaw says: ရွာမှာ ကျွန်တော် တို့ အတွက်
တကယ် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ကိုပေါက် ရေ။
အမှတ် ရ စရာ ကွန်းမန့် လေး အတွက်
မြစပဲရိုး says: ကိုချော က လူတွေ ကို တလေးတစား မှတ်ချက် ပေးတာ ကို သာမာန်တောင်မဟုတ်။
အရောင်ချယ်ပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုပါ စ ခဲ့တာ ထင်ရဲ့။
အဲဒါတွေကို လွမ်းပါတယ် ကိုချော ရဲ့။ :-)))
black chaw says: မြစပဲရိုး ;
ခဏပြန်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ့် မောင် တစ်ယောက်ကို
နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆို တဲ့ အတွက်
@QUIL@ says: ခနပြန်ရောက်လာတယ် ဆိုပဲ…
၀င်ချင်တိုင်း ၀င် ထွက်ချင်တိုင်းထွက်ရအောင်..
ခီညား ကွကိုယ် လိပ်ဂေါင်း များ မှတ်နေသလား…
kai says: အင်းလေနော်….
နောက်နှစ် ၂၀၁၆ ဧပြီ၎ဆို.. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်.. ဒီရွာ… ၁၀နှစ်ပြည့်ပြီ…။
စာမူခ နည်းနည်း တိုးပေးပါ…။
စတာပါ…၊ စတာပါ…၊ စတာပါ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ထားပါအေ။
မနေလိုသူတွေကို လည်း မပြောတော့ပါဘု။
ကိုဂျီးဘက်က နာ တို့ လို ရွာ့ အော်ကြောတွေနဲ့ တစ် ဂရုတည်းလို့ အထင်ခံရမှာ ကြောက်နေမှန်း သိသွားပါပြီလေ။
အားလုံး အပေါ် မိတ်ဆွေတို့ ဝတ္တရားကျေပြီးတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ်။
တူမ ၆၉ ယောက်ထဲမှာ ခင်ဇော့်ကို အချစ်ဆုံးပါလို့။
အခုလည်း အဲဒီ အတိုင်းပါပဲ။
ဦးဘက်လိုပဲ ညီးကို ချစ်ကြသူတွေကလည်း
တချို့ပုစ္ဆာ တွေကို ဖြေရှင်းဖို့
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေး ချည်းကပ်တာသာ အကောင်းဆုံးပါဗျာ။
မပတ်သက်စေရတော့ပါဘူး တွေ ဘာတွေ လုပ်ရမယ့် အဆင့်မှ
ဦးဘက်က ခင်ဇော် နဲ့ ပတ်သက်ရင်
လွမ်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဦးဘက်က ပိုမှာပါဗျာ။
မြစပဲရိုး says: ကိုကို မောင်မောင် ဘလက်ချော လေးရယ်
အဲ့ နံပါတ်ကြီး ကို မသုံးဘဲ +1 (or) -1 လေး လုပ်လို့ မရဘူးလား ကွယ်။ lol:-)))
Wow says: ဟင်င်င်… ဘာလား နာဘာမှ မသိလိုက်ပါလား .. အာ့ဂျောင့် နာ့ဂို မယ်ခွစ်က “အ” တယ်ပေါတာ.. Was this answer helpful?LikeDislike 12398
black chaw says: @ QUILA@ ;
ကျမ က လိပ်ခေါင်းပါ မောင်…။
ကွန်းမန့် တစ်ခါပေးဖို့ တစ်ခါဝင်တိုင်း တစ်ခါလော့အင်လုပ်နေရမှတော့
ထွက်လိုက် ၀င်လိုက် နဲ့
ငါတို့က လိပ်ခေါင်း ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူးဟ…။
surmi says: တစ်ခါက ………
ညဥ့်နက်သန်းကောင်တွေမှာ ရွာထဲဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
နံနက် အလင်းရောက်တိုင်း ရွာထဲရှိနေခဲ့ပါတယ် ။
အချိန်အခါမရွေး ရွာထဲ ပျော်နေခဲ့ပါတယ် ။
မီးပွိုင့်မိတိုင်း ရွာထဲလာနေဆဲဆိုရင် ………
ယုံမလားဗျာ ။ တစ်ခါတရံ ……
အတွေးတွေနစ်မွန်း ၊ စကားလုံးတွေပျောက် ၊ ကွန်မန့်လေးတစ်ခုတောင်မှ မရေးနိုင်ခဲ့ ။
ခြေလှမ်းတွေကတော့ ရွာတံခါးမှာ တဝဲလည်လည် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ယုံပါတယ် ကိုဆာ ရယ်။
အားလုံး က သတိ ရ နေကြမှာပါ။
ကွန်းမန့် လေး ဝင် ရေးပေးတာ
weiwei says: ဒီလောက် ခေါ်နေမှတော့ ကိုယ်ထင်ပြအုန်းမှပါ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: မဝေ ကွန်းမန့် လေး ဖတ်ရတာ
နောက်တစ်ပုဒ် တင်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်သွားတယ်…။
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ဆရာဦးလေးဘလက်ခင်ဗျ… မအားတာလဲပါတယ်.. အလွယ်သုံး၊ ရေးလို့ရတဲ့
ဖွဘုတ်ပဲ ကျင်လည်နေတာကြာပေါ့။ ဆရာပြောသလိုပဲ ဂေဇက်က ကျနော့် ရည်းစားဦးပါ…
အချစ်ဦးဆိုတော့ စာရေးရင်တောင် ရှန်တိန်လေးရေးမရတော့…
အားထည့်ရေးမယ် ကြံရင်းကြံလိုက်ရင်းနဲ့ မရေးဖြစ်တော့တာပါဗျာ..
အချစ်ဦးဆိုတော့.. ကိုယ်နဲ့ မရလိုက်ပေမဲ့.. ပတ်ချောင်း ပတ်ချက်တော့ လုပ်နေဆဲပါ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ဟေးဟေး။
Swal Taw Ywet says: တူမတော်က ရွာထဲမလာဘူးဆိုပြီး ကျိမ်း။
အဒေါ်လုပ်သူက ရွာထဲ သွားရင် သိမယ်ဆိုပြီး လက်တပြင်ပြင် ( မျက်နှာပူလို့သယ့် )
Free Wifi ရနေသာတောင် မလာဘူးလို့ အမတော်တွေက မေတ္တာပို့သ။
ဘယ်ပျောက်နေတာတုန်းလို့ အကိုတွေက လှမ်းမေး၊
ဝေးးးးးးတ မြေမြမြမြမြ ခြားခြားးးးးးးးးးးး
ပြန်လာတာ မကြိုရင် သိမယ် ဇီဇိရေရရရရရရရရရရရရရရ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများး အိပ်ချိန် လာသကိုးးး
ချက်ချင်းး ဘယ်ကြို နိုင်မတုန်းးး
black chaw says: @ Swal Taw Ywet ;
ဦးကျောက်ခဲ says: နောက်ကျမှ အပေါက်ဝမှာ မျက်နှာလာပြမိတဲ့ ကျောက်စ်ကို ခွေးလွှတ်ပါ ဆြာဘလက်…
ကျောက်စ်ကတော့ ရွာကို သံယောဇဉ်မပြတ်တဲ့အပြင် တိုးမိလို့ ပုံမှန်မမန့်နိုင်တာ…
အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ရွာ့မြေးလေး “ဝီလီဂဇက်” ကို ထိန်းရတယ် ခင်ဗျ…
ရွှေပြည်ကြီးပြန်ရောက်ရင် ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ ဆုံနေကြမို့ကလည်း တကြောင်း…
အဝိုင်းလည်နေတဲ့ ကိုးနတ်ရှင်ကြောင့်ကလည်း တကြောင်း…
အွန်လိုင်းပေါ်မတက်ဖြစ်တာတော့ နားလည်ပေးကြပါ ခီညား … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2395
aye.kk says: အနှစ်တစ်ရာ မနေရပေမယ်လို့
မေ့မရတာ ဂဇတ်ရွာပါ ကိုဘလက်ရေ ။။